Waxa lagu sameeyo Tenerife | Safarka Absolut
Waxa lagu sameeyo Tenerife
Lugaha Alberto | | Islands Canary, Espana, Tenerife
Jasiiradaha Canary waxay soo bandhigayaan buste xulashooyin iyo soojiidasho leh oo laga helo Tenerife xudunta ugu wanaagsan ee lagu raaxaysto dhammaantood. Xeebaha riyada ilaa meesha ugu sarreysa (iyo guuxa) Spain, waxaa jira waxyaabo badan waxa lagu sameeyo Tenerife.
1 Gali Beerta Qaranka Teide
2 Ku raaxeeyso xeebaheeda
3 Daawashada Niblaha ee Tenerife South
4 Ku qanacsanaanta dhismaha gumeysiga ee La Orotava
5 Ku lumso kaymaha sixirka ah ee Anaga
6 Bal u fiirso Los Gigantes
7 Dhadhamiya gastronomy-ka macaan
8 Booqo Santa Cruz de Tenerife
Gali Beerta Qaranka Teide
Halyeeyga Guanches-ka qadiimiga ah wuxuu sheegayaa in qorraxda ilaahey uu afduubay ilaah xumaha ah ee Guayota laguna xiray meel fulkaano ah. Sheeko suurtagal ah inay sharraxdo qaraxyadii dhacay 1492, wax yar uun ka hor Bixitaankii Christopher Columbus ee Dunida Cusub, ama tii 1798, taas oo ku daboolay muuqaalkan dayaxa lava. Iyadoo 3718 mitir sare, Mount Teide ma aha oo kaliya midka ugu sareeya Spain, laakiin sidoo kale waa volcano saddexaad ee ugu xun adduunka. Astaan ​​u rogeen Beerta Qaranka ee loo yaqaan Teide mid ka mid ah ugu booqashada badan Spain, gaar ahaan qaabkeeda sida Dhaxalka aduunka sanadkii 2007. Doox dayaxeed oo la galo intaad ku guda jirtid halistaaga Tenerife si aad ugu dhawaato sida ugu macquulsan waxa loo arko “saqafka Spain”.
Ku raaxeeyso xeebaheeda
Xeebta Las Teresitas
Tenerife waxay leedahay qaar ka mid ah xeebaha ugu fiican Spain. Biyaha Turquoise ee ka soo horjeedda ciida cad (ama madow) ee xeebaheeda, buuraha iyo meelaha qarsoodiga ah. Ku Xeebta Adeje, mid ka mid ah meelaha ugu dalxiis badan ee jasiiradda mahad meelaha sida Los Cristianos, ku jira xeebaha riyo sida tii Duke ama Las Amerika. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku qubeysato xeebo aad u badan oo aan la geli karin, buuraha Rafaa Waxay ku qariyaan godad iyo godad inta u dhexeysa daldaloolooyinka dhulkan duurku ka tolay. Ama soo jiidashada duurjoogta ah foornada, oo ka go'doonsan buuqa iyo dalxiiska, loona arko mid ka mid ah xeebaha ugu caansan Tenerife: Teresitas-ka, in ka badan kiiloomitir dheer.
Daawashada Niblaha ee Tenerife South
Dolphin xorriyadda biyaha Tenerife
Jasiiradaha ayaa had iyo jeer ah meel wanaagsan oo lagu arko noocyada biyaha ee duurka. Tenerife ma foga. Iyadoo kor u socota 21 nooc oo kadis ah ayaa diiwaangashan biyaha Canary Island, Doolfinnada dhalooyinka ku jira iyo nibiriyada duuliyeyaasha waxay noqdaan halyeeyada ugu muhiimsan ee waxkasta oo saaran markab catamaran ah, maadaama ay sii joogaan sanadka intiisa badan koonfurta Tenerife. Dalxiisyo kala duwan ayaa maalin kasta ka baxa Puerto Colón ama Los Cristianos si ay u arkaan xayawaanadan sharafta leh ee ku jira xaaladdooda dabiiciga ah. Had iyo jeer, haa, ixtiraamida booskooda iyo qaab nololeedkooda. Shaki la'aan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Tenerife.
Ku qanacsanaanta dhismaha gumeysiga ee La Orotava
Ma garanayno inay sabab u tahay booskeeda oo ka fog jasiiradda, dabeecaddeeda kulaylaha ama jawiga jasiiradda, laakiin runtu waxay tahay in Canariesku ay wax badan ka cabbaan dhaqanka waddamada Latin Amerika, iyo dhismaha ayaa ka mid ah. Tusaalaha ugu fiican wuxuu ka kooban yahay magaalada La Orotava, oo ku taal Waqooyiga Tenerife, oo ah magaalo guryo midab leh, balakoonno alwaax ah iyo kaniisado waqti kale noo kaxeeya gaar ahaan Cartagena de Indias ama Cuban Trinidad. Sida icing, ma jiraan wax ka fiican fiiri milkiilayaasheeda biyaha qadiimiga ah dhadhamiya gofiyada caanka ah, Nooc bur ah oo laga sameeyay badarka la shiilay oo ka kooban qaar ka mid ah suxuunta ugu caansan ee cunnada jasiiradda.
Ku lumso kaymaha sixirka ah ee Anaga
Laurel waa nooc ka mid ah daruurta iyo keynta kulaylka ah jooga meelaha sida xeebta Chile, Uruguay, Argentina ama gobolka Macaronesian ee ay ku jiraan Jasiiradaha Canary. Janno sixir ah oo aan ka heli karno qayb ka mid ah 'Tenerife', si gaar ah iyada oo loo marayo marin-socod sixir ah oo loo maro Anaga, qaybta waqooyi-bari ee jasiiradda. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kaymaha ugu da'da weyn Yurub, Anaga waxaa ku jira koox ferns ama junipers, tuulooyin lumay iyo aragtiyo wadnaha istaaga oo ka dhigaya tan mid ka mid ah khibradaha ugu fiican ee lagu raaxeysto jasiiradda Tenerife.
Bal u fiirso Los Gigantes
Tenerife waa jasiirad dawakhsan, oo ay ka buuxaan taallo dabiici ah oo neefta kaa qaada. Midkoodna shaki la’aan waa Los Gigantes, buuro dhaadheer oo dhererkoodu gaarayo 600 oo mitir. Dhismahan dhagxaanta leh waxaa loo tixgeliyaa Guanches-kii hore inuu yahay "derbiyada Ibliis" kaliya ma qarinayo qaar ka mid ah bakhaarradii ugu quruxda badnaa ee geesaha, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan daawo gabbaldhaca Tenerife, gaar ahaan Punta Teno ama xeebta Los Guíos. Si fudud sixir.
Dhadhamiya gastronomy-ka macaan
Dabeecada jasiiradda waxay siisay gastronomy ee Canary Islands, iyo gaar ahaan Tenerife, oo leh dabeecad gaar ah. Halka ay caan ku tahay baradho duuduuban oo leh mojos dhadhan iyo midabbo kala duwan leh Waxay ka kooban yihiin saxanka ugu weyn ee loo yaqaan 'Fortunate', waxaa jira waxyaabo kale oo macaan sida gofio aan soo sheegnay, hilib ari, ukumo ilaa shaabadaysan (ukumo leh baradho, chorizo ​​ama basbaas macaan), maraqa Canarian ama cabitaankeyga aan ugu jeclahay. barraquito. Kafee aad u qurux badan oo laga sameeyay qorfe, diirka liinta ama caano uumis leh.
Booqo Santa Cruz de Tenerife
In kasta oo caasimadda Tenerife aysan ahayn soo jiidashada ugu weyn ee jasiiradda, haddana weligeed dhib malahan inaad ku lumiso waddooyinka magaaladan jasiiradda ah oo qaafiyaddeeda, dadka iyo midabkaba lagu qaddarin karo gees walba. Laga soo bilaabo casriga Hoolka Tenerife ilaa kii hore Qasriga San Cristóbal, maraya baaxaddeeda Rambla ama xitaa Palmetum, mid ka mid ah geedaha timirta ugu waaweyn Yurub, Santa Cruz de Tenerife waxay dhisaysaa microcosm cosmopolitan ah oo ay ka aadi karto raadinta waxyaabaha cusub.
Tenerife waa jasiirad isweydaarsi ah oo xaflad, dabeecad iyo nasasho ay isku dhex galaan, oo nagu martiqaadaya inaan soo ogaanno geesaheeda iyo sirteeda. Meel sare oo ku habboon oo laga bilaabo Jasiiradaha Canary ee lagu calaamadeeyay qalaad gaar ah.
Midkee waxyaalahan ka mid ah oo laga sameeyo Tenerife ayaa soo jiita dareenkaaga ugu badan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waxa lagu sameeyo Tenerife
Mekong Delta: waxay hoos u martaa kuleylaha Vietnam
Magaalooyinka ugu quruxda badan Asturias